Antsohihy: « Somparan’ny « Samy Jao » ny « Lampogno » », hoy i Jean Rigo | NewsMada
Antsohihy: « Somparan’ny « Samy Jao » ny « Lampogno » », hoy i Jean Rigo
Fialan-tsasatra, fotoana filanonana sy famohazana indray ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy, any amin’ny faritra tsirairay any. Toa sembanin-drahona izany ho an’ny any Antsohihy, faritra Sofia. Ataon’ny manampahefana sasany izay tsy hahafaty ny « Lampogno ».
Tato anatin’ny folo taona izao ary isaky ny herinandro farany amin’ny volana aogositra, manakoako, any Antsohihy any, ny fety. Tontosaina amin’io fotoana io ny « Lampogno », « festival » enti-manandratra sy mitrandraka ny kolontsaim-paritra. Tato anatin’ny taona maromaro anefa izay, misy ny fingampingana atao amin’ny mpikarakara izany, ny fikambanana Lampogno, tarihin’i Jean Rigo, mpanakanto tsy zovina intsony.
« Na teo aza izany, tanteraka hatrany ny hetsika noho ny fahatokisan’ny mpanohana sy ny fitiavan’ny mponina any an-toerana », hoy hatrany ity mpihira fanta-daza ity. Tsy nijanona hatreo anefa ny « raharaha ». « Rehefa tsy hitan’ireo manampahefana sasany intsony izay atao hanapotehana ity hetsika ity, namorona « festival » ihany koa izy ireo. Tsy vitan’izany, hataony herinandro mialoha ny « Lampogno » izy io, any Antsohihy any, ary niniana tsy asiana vidim-pidirana ny fampisehoana rehetra amin’io », hoy hatrany i Jean Rigo.
Raha ny nambaran’ity mpanakanto ity ihany, tsy fitiavana tsotra izao no antony faminganana sy hanapotehana ny hetsika ara-javakanto efa fikarakaran’izy ireo an-taona maro. Izany « Samy Jao » izany ny anaran’ilay « festival » iray hafa. Anarana tsy mifanalavitra amin’ilay manampahefana mikarakara azy ihany, araka ny filazan’i Jean Rigo hatrany.
Hanamarika ny 10 taona nijoroany ny « Lampogno »
Na izany na tsy izany, hotanterahina ny 24 hatramin’ny 27 aogositra ny andiany fahafolo amin’ny « Lampogno ». Hiavaka amin’ireo andiany teo aloha izy ity, satria sady hanamarihana io tsingerin-taona fahafolo io. Misy mihitsy ny lohahevitra manokana noraisina amin’izany, ny hoe « Tamboroho », izay midika hoe fiaraha-misakafo sy mifaly taorian’ny asa niaraha-nanatontosa.
Hita mandritra ity « festival » ity avokoa ny hetsika ara-javakanto sy ara-kolontsaina, ny fifaninanana ara-panatanjahantena ary ny hetsika ara-toekarena, indrindra ny lafiny fizahantany. Ho an’ny tontolon’ny zavakanto, hampiavaka izao andiany fahafolo amin’ny « Lampogno » izao ny fifaninanana dihy sy mozika nentim-paharazana, izay hibahan-toerana tokoa. Eo koa ny fifaninanana tovovavy tsara tarehy indrindra, izay tsy maintsy haneho ny soatoavina sy ny kolontsaina. Ankoatra ireo, handravaka ny diabe, izay efa mahazatra, ny fandefasana afomanga mandritra ny 25mn.